ယာဥ္မရပ္ရ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ထားသည့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အခြန္ေဆာင္ရေတာ့မည္...! - Thadin
HomeNEWSယာဥ္မရပ္ရ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ထားသည့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အခြန္ေဆာင္ရေတာ့မည္…!
May 19, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ယာဥ္မရပ္ရ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ထားသည့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အခြန္ေဆာင္ရေတာ့မည္…!
ယာဉ်မရပ်ရဟူသော ဆိုင်ဘုတ်များအား မန္တလေးမြို့လမ်းမပေါ်ရှိ အိမ်ပိုင်ရှင်များက အများဆုံးထားရှိပြီး ယင်း လာရောက်ရပ်နားလျှင် ရပ်နားသူအား မချေမငံပြောခြင်း၊ မည့်သည့် အခွန်မျှ ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိတို့ ပိုင်သည့် ပုံစံမျိုး လုပ်ဆောင်နေခြင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
This Year : 271833
Total Users : 630857
Total views : 2953989